Orinasa fandanjana rafitra - Mpamboatra mpamokatra rafitra milanja China
Mpikatroka fifandanjana mikoriana JJ – LPK500
Teknolojika fanitsiana fahatsiarovana toetra
avo lenta ny akora
Mpanome sakafo fatiantoka-in-lanja JJ-LIW
Ny feeder fandrefesana fandrefesana mavesatra be an'ny LIW dia mpamatsy fandrefesana avo lenta natao ho an'ny indostrian'ny fizotrany. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fifehezana fitohanana tsy tapaka tsy tapaka ary ny fizotran'ny famolavolana ny granular, ny vovoka ary ny ranoka amin'ny toerana indostrialy toy ny fingotra sy plastika, indostrian'ny simika, metallurgy, sakafo ary feed-grains. Ny feeder fandrefesana fandrefesana mavesatra be an'ny LIW dia rafitra fisakafoanana haingam-pandeha noforonin'ny mekatronics. Izy io dia manana sakany fihinana malalaka ary afaka mihaona amin'ny fampiharana isan-karazany. Ny rafitra iray manontolo dia marina, azo antoka, mora ampiasaina, mora mivory sy mitazona, ary mora ampiasaina. Ny maodely andiany LIW dia mandrakotra ny 0,5～22000L / H.
JJ-CKW30 Checkweigher mavitrika haingam-pandeha
CKW30 checkweigher haingam-pandeha haingam-pandeha mampiditra haitao haingam-pandeha haingam-pandeha an'ny orinasanay, teknolojia fanaraha-maso hafainganam-pandeha tsy misy tabataba, ary teknolojia fanaraha-maso mechatronics efa za-draharaha, ka mahatonga azy io ho mendrika hamantarana haingana，ny fanasokajiana, sy ny fanadihadiana statistikan'ireo entana izay milanja 100 grama sy 50 kilao dia mety hahatratra ± 0,5g ny mari-pahaizana. Ity vokatra ity dia be mpampiasa amin'ny famokarana fonosana kely sy vokatra be dia be toy ny akora simika isan'andro, akora simika tsara, sakafo ary zava-pisotro. Izy io dia checkweigher ara-toekarena miaraka amin'ny fampisehoana lafo be.
Ny rafitra mitete BC500FD-Ex dia vahaolana fanaraha-maso mikoriana mavesatra novolavolain'ny orinasanay mifototra amin'ny toetra mampiavaka ny fifehezana lanja indostrialy. Ny dripping dia fomba fanao fahana be any amin'ny indostrian'ny simika, amin'ny ankapobeny, fitaovana iray na maromaro no ampidirina tsimoramora ao anaty reaktor ao anatin'ny fe-potoana voatondro arakaraka ny lanja sy ny tahan'ny takiana amin'ny fizotrany, hanaovana ny fanehoan-kevitra amin'ireo akora hafa mifangaro mba hamokarana. ny fitambarana tadiavina.
Kilasy porofo-mipoaka: Eks【ib IIC】IIB T6 Gb
JJ-CKJ100 Checkweigher manainga-misaraka
Ny fizarana fanodinana horonan-tsarimihetsika CKJ100 dia mety amin'ny famonosana sy fandanjana ny boaty misy ny vokatra rehefa eo ambany fanaraha-maso. Rehefa tsy ampy lanja na be loatra ny entana dia azo ampitomboina na hihena amin'ny fotoana rehetra. Ity andiam-vokatra ity dia mandray ny famolavolana patanty ny fisarahana ny vatan'ny refy sy ny latabatra, izay manala ny fiatraikany sy ny fiantraikan'ny enta-mavesatra amin'ny vatan'ny ambaratonga rehefa mavesatra sy miala ny boaty iray manontolo, ary manatsara be ny tsy fitoviana fandrefesana sy ny fahamendrehan'ny milina iray manontolo. Ny vokatra andian-tsarimihetsika CKJ100 dia mandray ny endrika maodely sy ny fomba fanamboarana miovaova, izay azo ampifanarahana amin'ny latabatra fanodinam-pahefana na fitaovana fandavana arakaraka ny filan'ny mpampiasa (rehefa tsy arahi-maso), ary be mpampiasa amin'ny fitaovana elektronika, ny ampahany, ny simika tsara, ny akora simika isan'andro, ny sakafo, ny fanafody. , sns. ny tsipika famokarana indostrialy.
Ny lanjan'ny fikajiana ny refy, Shear Beam Load Cell, Lanja voamarina, Calibration lanjan'ny napetraka, Calibration Mass, Ny lanjan'ny fikajiana ho an'ny mizana nomerika,